Football Khabar » कोपा डेल रे भिडन्त : बार्सिलोनालाई लेगानेसका प्रशिक्षकको ‘रातो बत्ती’ !
कोपा डेल रे भिडन्त : बार्सिलोनालाई लेगानेसका प्रशिक्षकको ‘रातो बत्ती’ !
स्पेनिस कोपा डेल रे फुटबल प्रतियोगितामा आज बार्सिलोना र लेगानेस अन्तिम आठमा जान अन्तिम १६ को खेल खेल्दैछन् । बार्सिलोनाको घरेलु मैदानमा हुने यो खेल नेपाली समयअनुसार राति ११ः४५ बजेबाट सुरु हुनेछ ।
सो खेलअघि लेगानेसका प्रशिक्षक जाभिर अगुइरेले क्याम्प नोउमा बार्सिलोनाविरुद्धको खेललाई लिएर धारणा राखेका छन् । खेलअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कुरा गर्दै उनले आफूहरू कठिन तर जित्न सक्ने खेल खेल्न क्याम्प नोउ जाने बताए । ‘हामी क्याम्प नोउमा एक कठिन खेल खेल्न जाँदैछौं । तर, यो हामीले जित्नै नसक्ने खेल होइन,’ जाभिरले भने, ‘बार्सिलोना विश्वकै एक बलियो टिम हो । तर, हामी आफ्नो तर्फबाट राम्रो गर्नेछौं ।’
जाभिरले क्याम्प नोउमा घरेलु दर्शकमाझ खेल्न मनोवैज्ञानिक रूपमा कठिन हुने भए पनि आफ्ना खेलाडी तयार रहेको बताए । ‘उनीहरूले हामीले पहिलो मिनेटबाटै दबाबमा पार्र्नेछन् । किनभने, उनीहरू आफ्नो घरमा हुनेछन् । तर, हामी घरेलु टोलीविरुद्ध रणनीतिक खेल खेल्नेछौं । उनीहरूले हामीलाई हराउन सक्छन् । तर, सजिलैसित हैन,’ जाभिएर भने ।
बार्सिलोनाविरुद्ध खेल्ने रणनीतिबारे सोधिएको प्रश्नमा जाभिरले जहिल्यै पनि साना टिम ठूला टिमसँग खेल्दा उनीहरूको कमजोरीसँग खेल्न प्रयास गर्ने बताए । ‘उनीहरूसँग उत्कृष्ट टिम छ । त्यसो हुँदा हाम्रो योजना उनीहरूको कमजोरी टेकेर त्यसको प्रयोग गर्नु हुनेछ । मलाई बार्सिलोनाको कमजोरी थाहा छ, मैदानमा त्यही कुरा पर्खेर खेल्नेछौं ।’
जाभिरले आफूहरूले ९० मिनेट वा १२० मिनेटमै खेल्न हार्न नचाहेको बताए । कम्तीमा खेललाई पेनाल्टीसम्म लैजान आफूहरूको लक्ष्य हुने बताए । ‘हामी ९० वा १२० मिनेटमा हार्न चाहँदैनौं । हाम्रो लक्ष्य जित वा निर्धारित समयमा बराबरी गरेर खेललाई पेनाल्टीसम्म लैजानु हुनेछ,’ जाभिरले भने, ‘टिम जति नै बलियो र कमजोरी भए पनि पेनाल्टीमा ५०–५० सम्भावना हुन्छ ।’
यदि बार्सिलोनाका कप्तान लिओनल मेस्सी खेले उनलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा जाभिरले मजाकपूर्ण भनाइ राखे । ‘मलाई लागछ, उनी यस खेलमा सुरुबाटै हुनेछन् । मेस्सी टोलीमा हुँदा विपक्षी टिम सधैं दबाबमा हुन्छ, यो सामान्य कुरा हो । किनभने, उनले हरेक क्षण खेलमा नयाँ मोड सिर्जना गर्न सक्छन्,’ जाभिरले भने, ‘हामी मेस्सीवरुद्ध मात्रै खेल्नेछैनौं, बार्सिलोनाविरुद्ध खेल्नेछौं । मलाई थाहा छ, हामीले राम्रो खेल्यौं भने मेस्सी आफैं रोकिनेछन् ।’
प्रकाशित मिति १६ माघ २०७६, बिहीबार १७:३२